XARUNTII DHALINYARADA BURCO (BMYRC) EE DAWLADDU LAHAYD OO NIN SHICIB AHI KU SHAQAYSTO
Thursday October 31, 2019 - 08:09:51 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Xarunta dhallinyarada Burco waxaa dhistay hay’adda Unicef muddo laga joogo 10 sannadood. Dhaqaalaha ku baxay waxaa bixisay dawladdaa Japan.
Xarunta dhallinyarada Burco (Burco Multi-purpose Youth Resource Center) ama marka la soo gaabiyo loo yaqaanno BMYRC waxay ku taalla xaafadda Maxamed Cali. Waxaa dhulka laga dhisay bixisay wasaaradda waxbarashada oo bogcaddaa waxaa lahayd xaruntii agoomaha Burco. Dhismahaa markii la dhammeeyay waxaa lagu wareejiyay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Hasee yeeshee waxa mar qudha lagu arkay NGOga loo yaqaano SYS ee uu leeyahay nin lagu magacaabo Maxamed Aadan oo xaruntii dhallinyarada iska maamulanaya iyadoo cidi kula tartamin heshiis (lease contract) aanay dawladdu la gelin. NGOgii wuxuu isu qaatay inuu iska leeyahay xaruntii dhallinyarada Burco. Wuxuu NGOgaasi uga faaidaystay iyadoo meeshii la socodkeedii (oversight) ay yeesheen laba wasaaradood oo mid waliba ka kale uu ku halleeyay.
Xaruuntii dhallinyarada Burco maanta marxaladda ay ku sugantahay waa mid baaba’ah iyadoo mashaariic fara badan lagu soo qaatay sannadahaas oo dhan musuq maasaq farabadanina iyo xisaabtan la’aanina ay dhulka la gashay.
Dhismihii sidii Unicef u wareejisay xabad musbaar ah laguma darin. Dhismaha waxaa ka muuqda basaas fara badan iyadoo aan rinji weligeed la marin. Garoonkii lagu ciyaari jiray kubadda gacanta oo isaguna googo’ay. Garanwaaga ku baxay iyo meeluhu biyaha roobku googooyeen ee aan la dhisin waa mid laga naxo.
Qalabkii loogu tala galay xirfadaha gacanta in lagu barto beri hore ayaa la xaraashay oo fasalladii qaabkay u egyihiin iyo darxumada ka muuqata waa mid subxaanallah ah. Waxaa intaa dheer qalabkii dhallinyaradu ku jimicsan jireen ee gymka oo iyana beri hore la xaraashtay.
Maktabaddii iyana waa laga qufushay dhallinyaradii oo computaradii iyo buugaagtii taallay ee nafta lahaa beri hore ayaa iyana la xaraashtey oo waxaa ku soo hadhay meesha in yar oo muunad ahaan loo dhigtay.
Wax qoraal ah ama tabbeelo muujinaysa in dhismaha ama xaruntu dawladdu leedahay ma jirto haba yaraatee oon tabbeelada meesha ku dhegsan waa tii NGOga oo keliya.
Sharci ahaan, hay’addii xarunta dhistay iyo dawladduba way ka mamnuucday inuu NGO meesha dhex dego marka laga reebo maamulaha xarunta dhallinyarada oo qudha. Taas cakiskeeda NGOgu xaruuntii ayuu dhex degayba si uu kirada uga baxsado taasoo markii hore heshiiska ku jirin.
Waxaa intaa dheer mashaariicda la qaato waxaa la socota miisaaniyadda kirada taasoo lagu wareejin dawladda ama wasaaradda ay khusayso. Hoolka waxa laga kireeya siminaarada iyo xafladaha, maqsinnada qaarna waxaa laga kireeyaa xafiisyada laamaha ka furanaya Burco oo ay ugu dambaysay wax laga kireeyo hay’adda xuquuqul insaanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno HRC. Intaas oo lacag ah kuma xeroodaan dawladda ama wasaaradd ay khusayso cashuurna lagama bixiyo.
Hay’adihii caalamiga intooda badan meesha dhaqaalihii ay ku bixiyeen waxay kala kulmeen isdabab marin sidaa darteedna intooda badan (kuwa cusub mahee) liiska madow ayay geliyeen NGOga SYS.
Arrinta ugu naxdinta badan waxa weeye dhallinyaradii Burco kuma jiraan guddida xarunta maamusha, labadii wasaaradoodna cidi awr hallabay ma waydiiso. Sidaa daraadeed meeshii waxay noqotay meel uu shakhsi shicib ah si arxan darro ah u maalo oo aakhirkii uu xaruntii dhallinyarada gaadhsiiyay dhiig bax.
Wakhti xaadirkan SYS waxaa u socda mashruuc nafaqaynta dhallaanka ee MCHyada gobollada laga wado. Mashruucaa oo loo yaqaanno SHINE waxaa iska leh wasaaradda caafimaadka. Waxaana ugu mucjiso badan mashruucaa waxaa laga maamulaa xaruntii dhallinyarada oo ay si wadajir ah u lahaayeen labada wasaaradood ee dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo waxbarashada iyo tacliinta sare.
Waxaan intaa ku soo gabagabaynayaa in wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare si wadajir ay baadhitaan audhit ah ugu diraan meesha si loo xisaabiyo.
Wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waa in ay meesha iyadu maamulato oo la kaashato hay’adaha caalamiga ah. Haddii kale wasaaradda waxbarashadu waxay dib ugu dhigi kartaa xaruntii agoomaha Burco oo ay markii hore ay ahayd.
Warbaahinta kala duwan ee magaalada Burco ku yaallaa waa inay iyaguna xarunta booqdaan si ay bal indhoohooda ugu soo arkaan masiibada xaruntan dhallinyarada ku dhacday oo baadhitaan iyo barnaamij ka soo diyaariyaan.
Iyaadoo Burco ay tahay magaalada ugu tahriibka badan haddana haddii hantidan dhallinyaradu dawladdu u ilaalin lahayd wax badan bay ka tari lahayd shaqo la’anta baahsan ee ka jirta magaalada Burco iyo nawaaxigeeda.
Khadar Cabdi Faarax,
Dhallinyaro deggan Xaafadda Maxamed Cali